အမြဲချစ်ပေးတဲ့ ဦးကင်းနဲ့ အမှတ်တရလေးတွေပြောပြပြီး ဝမ်းနည်းပူဆွေးနေတဲ့ သက်မွန်မြင့် 😭😭 – Myanmar Magazine
အမြဲချစ်ပေးတဲ့ ဦးကင်းနဲ့ အမှတ်တရလေးတွေပြောပြပြီး ဝမ်းနည်းပူဆွေးနေတဲ့ သက်မွန်မြင့် 😭😭
January 22, 2019 myanmarmagazine	အနုပညာသတင်း
သက်မွန်ကတော့ အနုပညာလောကထဲကိုရောက်ရှိလာခဲ့တာ ဆယ်စုနှစ်တစ်ခုကျော်ခဲ့ပါပြီ။ မိသားစုတွေနဲ့အတူ ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်ဖြတ်သန်းနေပြီဖြစ်တဲ့ သက်မွန်မြင့်ကတော့ ပရိသတ်တွေချစ်တဲ့ အနုပညာအလုပ်ကို ဆက်လက်ပြီး လုပ်ကိုင်နေခဲ့တာပါ။ အနုပညာမောင်နှမတွေဖြစ်ကြတဲ့ အနုပညာကြယ်ပွင့်တွေကြွေလွင့်သွားတိုင်း အနီးကပ်ဆုံးရှိခဲ့ဖူးတဲ့ အနုပညာရှင်တွေက ဝမ်းနည်းမှုတွေ ပိုခဲ့ကြရတာတော့ အမှန်ပါပဲ။
ဒီကနေ့ မနက်ပိုင်းမှာ ပရိသတ်တွေကိုပျော်ရွှင်ရယ်မောစေခဲ့တဲ့ ဟာသသရုပ်ဆောင် ကင်းကောင်တစ်ယောက် သူခ်ျစတဲ့ အနုပညာအလုပ်တွေကို လုပ်ကိုင်နေရင်း ကွယ်လွန်သွားခဲ့ပါတယ်။ ကင်းကောင်ဟာ ဟာသသရုပ်ဆောင် ပီပီ လူချစ်လူခင်များပြီးတော့ အနုပညာရှင်တွေကိုပါ ပျော်ရွှင်မှုတွေနဲ့အတူ စနောက်မှုတွေ အမြဲဖန်တီးတတ်သူပါ။ သူကွယ်လွန်သွားတဲ့အပေါ်မှာတော့ အနုပညာရှင်အတော်များများ ဝမ်းနည်းခဲ့ကြရပါတယ်။
သက်မွန်မြင့်ကတော့ သူမကို မပြောင်းလဲဘဲ အမြဲအချစ်တွေပေးတဲ့ ဦးကင်းရဲ့သတင်းကိုကြားလိုက်ရတာကြောင့် ရင်ထဲဟာကနဲဖြစ်သွားခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။
“ဒီမနက် နိုးတော့ ဒီသတင်းအရင်မြင်လိုက်ရတယ်.. ရင်ထဲ ဟာကနဲ!!!ကိုယ်အရမ်းချစ်ရတဲ့ ဦးကင်း🙊မော်ဒယ်ဘဝ အစပိုင်းမှာ ကြော်ငြာတူတူရိုက်ကြရင်း သူလည်း ကိုယ့်ကို ချစ်, ကိုယ်လည်းချစ် ဘယ်ချိန်တွေ့တွေ့ မပြောင်းလဲတဲ့ အချစ်တွေနဲ့ ချစ်ပေးတဲ့ ဦးကင်း! တကယ်ဝမ်းနည်းရပါတယ် ဦးကင်းရယ်…ကောင်းရာဘုံဘဝရောက်ပါစေလို့ ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်နော်🙏🏻🙏🏻🙏🏻စိတ်ထားကောင်းတဲ့သူ ကံကောင်းတယ်တဲ့.. အရမ်းချစ်စရာကောင်းတဲ့ ဦးကင်း ဒီဘဝထက်သာတဲ့ ဘဝမှာ အေးချမ်းပါစေနော်😔 ( ၂၀၁၅ ဒီဇင်ဘာက ရှုတင်မှာ တူတူဆုံခဲ့ကြတာ နောက်ဆုံးပဲနော်😢ဟိုတလောက ဦးဖိုးဖြူနဲ့တွေ့တော့ မေးလိုက်သေးတယ်.. နေကောင်းတယ်တဲ့..😔)” လို့ စိတ်မကောင်းစွာနဲ့ ရေးသားထားခဲ့တာပါ။
ဦးကင်းတစ်ယောက် ကောင်းရာမွန်ရာဘဝကိုရောက်ရှိသွားပါစေလို့ ချစ်တဲ့ပရိသတ်ကြီးနဲ့ ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်။We Love Cele
Photos-Thet Mon Myint
← ကျပ်သိန်း၅၀နဲ့ ဝေဠုကျော်အချုပ်လွတ် အာမခံရ
ဖောက်ပြန်နေတဲ့ဇနီးကိုခင်ပွန်းဖြစ်သူမှ အုပ်ချုပ်ရေးမှူးနှင့်အတူစောင့်ဖမ်း →
သရုပ်ဆောင် ဝေဠုကျော်က ကျပ်သိန်းတစ်သောင်းနဲ့ လာရောက်ညှိနှိုင်းတယ်လို့ ဖွင့်ဟလိုက်တဲ့ အလှမယ်သင်းသင်း
December 10, 2018 myanmarmagazine Comments Off on သရုပ်ဆောင် ဝေဠုကျော်က ကျပ်သိန်းတစ်သောင်းနဲ့ လာရောက်ညှိနှိုင်းတယ်လို့ ဖွင့်ဟလိုက်တဲ့ အလှမယ်သင်းသင်း
သဲကန္တာရထဲမှာ ချစ်သူလေးနဲ့ပျော်နေတဲ့ စိုင်းစိုင်း
February 8, 2019 myanmarmagazine Comments Off on သဲကန္တာရထဲမှာ ချစ်သူလေးနဲ့ပျော်နေတဲ့ စိုင်းစိုင်း
ချစ်မိသွားလို့ဆိုပြီး လက်ထပ်တော့မယ့် ရွှေရွှေစုံတွဲကို အားကျနေတဲ့ မင်းသမီးလေး ပိုးကြာဖြူခင်
November 2, 2018 myanmarmagazine Comments Off on ချစ်မိသွားလို့ဆိုပြီး လက်ထပ်တော့မယ့် ရွှေရွှေစုံတွဲကို အားကျနေတဲ့ မင်းသမီးလေး ပိုးကြာဖြူခင်